Mahakarlagyi | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
Mahakarlagyi	# နဂါးနှစ် လာပြီPublished January 29, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဟူးရားဗေဒင်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,860)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,992)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,899)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,411)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,466)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,597)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,625)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,989)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,318)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,277)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,111)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,057)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,853)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,817)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,304)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,142)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,509)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,197)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,186)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,686)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,678)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,555)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,269)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,252)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,918)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,708)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,482)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,033)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
12 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.